Blog-Tipping: Catalyze, tambajotra sosialy ho an'ny fampandrosoana lozisialy sy ny manam-pahaizana momba ny fampiasana | Martech Zone
Blog-Tipping: Catalyze, tambajotra sosialy ho an'ny fampandrosoana lozisialy sy ny manam-pahaizana momba ny fampiasana
Alahady Oktobra 21, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Efa elaela izay nametaka bilaogy ary nampahatsiahiviko izany fa tapa-bolana lasa izay nataon'i Tom Humbarger an'ny catalyze. Ny fiovan'ny asa sy ny fifanarahana momba ny lafiny iray dia nanenjana be ny fotoana laniko amin'ny tranokalako isan'andro. Soa ihany fa manomboka mihodina izao izany.
Voalohany, valin-teny sasantsasany momba ny fanoratana bilaogy teo aloha
Nahazo teny avy tamin'i André tao amin'ny Lendo.org aho fa ilay fanovana natolotro ho an'ny tranokalany niteraka fitomboana tsy nampino ny mpitsidika sy ny pejy. André dia nanana mpitsidika tsy manam-paharoa 290 isan'andro sy fomba fijerin'ny pejy 700 alohan'ny fanovana. ankehitriny, Lendo.org manana Mpitsidika tsy manam-paharoa 1200 isan'andro, ary pejy 3000 eo ho eo!!!
Androany, hanoro hevitra aho Catalyze - Vondrom-piarahamonina ho an'ny mpandalina momba ny asa aman-draharaha sy UX Professional - Mamorona rindrambaiko miavaka ny olona mamorona. Mihoatra lavitra ny bilaogy i Catalyze, tambajotra sosialy tokoa izy io ka ho fanamby tokoa! Tom dia nametaka ahy herinandro vitsivitsy lasa izay ary niandry tamim-paharetana izy!
Mety hihomehezana ianao amin'izany, saingy tsy maintsy nihady aho mba hahitana hoe inona no dikan'ny "UX"! Tsy tsapako fa fanafohezana ny User Experience. Tsy azoko antoka fa mitady ao amin'ny “UX” ny olona… mety te-hanoratra amin'ny “lozisialy ho an'ny mpampiasa” ianao amin'ny lohatenin'ny pejy, sns. Ao anatin'ilay pejy dia mety te hampiasa tags> fanafohezana> ianao: UX ka ny motera fikarohana dia mandady na ny teny na ny fanafohezana.
Hisy fanamby izany, saingy tena mamporisika anao aho hanome rohy fahana amin'ny pejin-tranonao. Raha afaka mamorona fahana feno momba ireo lahatsoratra farany ianao, fifanakalozan-kevitra farany amin'ny forum, ary angamba ireo hetsika farany - izay tena manome lanja be ho an'ny mpamaky.
Tamin'io fanamarihana io ihany, dia tsikaritro fa afaka nahazo feed RSS avy amin'ny bilaoginao aho, saingy tsy tafiditra ao anaty lohateninao hampidirina amin'ireo mpizaha. Ireo mpitsidika farany rehetra dia hitady fanondroana rohy RSS ao amin'ny lohatenin'ny pejinao ary hampiseho bokotra fisoratana anarana RSS ao amin'ny Barairesy Address izy ireo. Toy izao ny kaody:
Toy izao ny fisehony rehefa mankany amin'ny pejiko ao amin'ny Firefox ianao:
Toy izao ny pejin'ny pejinao:
Raha ataonao tsotra ny fisoratana anarana amin'ny tranonkalanao dia hahazo mpamandrika bebe kokoa ianao. Aza hadino ny mampiasa fitaovana toy izany Feedpress hanara-maso ny isan'ny mpanjifa anananao.
Raha Google Bot nandrava ny pejin'ny bilaoginao aho, dia nataoko ho “Blog thumbarger” ny pejinao… mety tsy ireo teny lakile tadiavinao. Raha azonao atao ny manova ny lohatenin'ny pejinao amin'ny lohatenin'ilay pejy, ao ity tranga ity: Mpandinika endrika ve ianao? Catalyze fahendrena ankehitriny an'i Tom Humbarger
Ny motera fikarohana dia mijery tsara ny fomba fananganana atiny ao amin'ny pejinao. Raha ny lahatsoratra ao amin'ny bilaoginao, ny lohatenin'ny lahatsoratra dia rohy tsotra miaraka amina kilasy = ”siblog_PostTitle”. Tsy hilaza amin'ny Search Engine izany fa misy zava-dehibe momba an'io Lohateny io. Raha azonao atao ny miditra amin'ny tsinay ampiasain'ny rindranasao dia azoko antoka fa manana tag misy lohateny aho, na> h1> na> h2> marika mamono ny lohatenin'ny lahatsoratra bilaogy. Azoko atao ihany koa ny manolotra soso-kevitra hanoratra lahatsoratra amin'ny alàlan'ny mari-pamantarana lohateny.
Angamba ny pejy misy ny fotoana mety indrindra dia ny pejin-tranonao. Ity dia pejy iray lehibe amin'ny rohy rehefa hitan'ny Search Engine. Raha pejy namboarina misy lohateny sy sombintsombiny nasiana marika araka izany, dia azonao atao ny mahazo tsara kokoa izany atiny izany.
Momba anao kalandrie pejy misy rohy Subscribe .. fa tsy misy na inona na inona amin'ilay rohy hisoratana anarana. Azoko antoka koa fa manondro ny lohatenin'ny pejy ianao rehefa nanoratra momba ny lohateny bilaogy.
Rehefa mihady amin'ny rafitry ny pejinao aho dia mahita tabilao sy divara sarotra tsy mampino. Tsy te-hitifitra an'ireo namako .NET namako aho, nefa matetika no hitako fa mankarary izany. Ny mpamorona .NET tsara dia hanana fotoana sarotra hitadiavana singa iray, ka manipy latabatra manodidina azy izy mba hahamora azy.
Ny tabilao dia natao ho an'ny angona, divs ary styleheets ho an'ny atiny.
Eritrereto toy izao - mody hoe mpikaroka motera fikarohana ianao ary manandrana 'mahita' izay atiny ao amin'ilay pejy mahasoa azo arahana. Maka sombin-pejy ny mpandeha zaridaina… tsy misy mahalala hoe firy isan-jato, fa tsy raisin'izy ireo ilay pejy iray manontolo. Manana kaody fandefasana endrika be loatra ny fampiharana anao ka sarotra ny mahita ny atiny! Ary amin'ny fotoana ataonao dia antsasaky ny pejy io. Ity fomba ity dia mahazatra loatra amin'ny fampandrosoana .NET. Manamora ny fanoratana ny fampiharana izany, fa sarotra kosa ny mamaky azy. Raha misy fomba ahafahanao manome hevitra momba ny rafitra fitantanana ny atiny, dia ampahafantaro azy ireo.
Tena te haka tampon'isa amin'ny "Powered by iRise" aho raha te hahalala fampahalalana bebe kokoa saingy nifandray tamina pejy banga io.
Nahazo tag Meta mavitrika ho an'ny teny lakile sy famaritana eto amin'ity pejy ity ianao. Mampihomehy, ny ankamaroan'ny motera fikarohana dia tsy dia miraharaha an'ireo, fa tsy afaka mandratra. Mila miasa anefa ny famaritana anao. Raha nahita ny pejin'ny kalandrieo ho vokatr'izany aho dia hiakatra ho "Catalyze | Events ". Tsy azoko antoka fa hahazo olona marobe ianao amin'ny fikitihana izany! Hampiasaiko ny andalana voalohany anao, “Ny kalandrie hetsika Catalyze dia loharano feno ho an'ny hetsika rehetra? eo an-toerana sa avy amin'ny firenena? izay mahaliana ny mpandinika raharaham-barotra sy ny matihanina miaina ny mpampiasa. ”
Tsy misy rakitra robots.txt ao amin'ny lahatahiry root. Ny rakitra Robots.txt dia ahafahan'ny botan'ny Search Engine mahalala ny fomba itadiavanao ny tranokalanao. Afaka mahita fampahalalana iray taonina amin'ny Robots.txt ianao amin'ity FAQ page.
Tsy misy rakitra sitemap.xml ao amin'ny lahatahiry fakanao ary tsy misy rakitra Robots.txt hanondro izay misy azy. Ny lakilen'ny fanaovana ny motera fikarohana ny tranonkalanao dia manamora ny fandehanan'ny Search Engine ny tranokalanao ary hahitanao hoe aiza no misy ny zavatra. Ny sitemap dia sori-dalan'ny fandaharana amin'ny tranokalanao. Raha tsy izany dia afaka mikaroka ilay tranonkala amin'ny alàlan'ny rohy fotsiny ireo Search Engine… tsy mahalala izay zava-dehibe na hoe ahoana no fomba fandaminana ilay tranonkala. Mety ity no zava-dehibe indrindra azonao atao amin'ny tranokalanao! Vakio ny amin'ny Sitemaps.org
Mieritreritra aho amin'ity farany ity, fa noho ny tsy fahampian'ny fitaovana miverina ampiasaina any Catalyze, dia mety tsy manaparitaka an'i Google Blogsearch sy ireo milina fikarohana lehibe ny tranokalanao rehefa misy ny fanovana ny tranokalanao na ny lahatsoratra amin'ny bilaogy. Indray mandeha indray, tsy hoe tsy ho hita ny tranokalanao, fa ny fampandrenesana mavitrika ireo serivisy manodidina ny harato dia tsy handratra mihitsy.
Manana iray heck amin'ny tranokala ianao, Tom, saingy tsy misy mahafantatra fa misy izany noho ny tsy fisian'ny Search Engine Optimization. Topazo maso ny SEODigger eo amin'ny tranokalanao ary ny "Catalyze" fotsiny no ivoahanao. Very maina daholo ireo atiny rehetra ireo raha tsy hoe afaka mahazo ny tranokalan'ny Search Engine ianao. Raha manontany tena ianao hoe maninona ny "Catalyze" no teny lakileo, zahao ny a fikarohana mitodika amin'ny tranokalanao dia ho hitanao ny antony.
Tsara vintana! Tsy azoko antoka raha nahazo loharanom-pahalalana mba hanovana ianao sa tsy maintsy hiasa amin'ny alàlan'ny orinasa namolavola ny fampiharana, saingy misy asa kely tokony hatao.
Tags: fametahana bilaogytoro-hevitra amin'ny bilaogymandringana
23 Oktobra 2007 à 9:49
Eny! Fandrosoana lehibe ho an'ny bilaogiko ny toro-hevitra. Ankehitriny aho dia miasa mafy mba hahatratra 2000 tokana isan'andro.
Asa tsara Douglas!